Fantastical 3.0: नि: शुल्क र सदस्यता मोडको साथ म म्याकबाट हुँ
Fantastical 3.0: नि: शुल्क र सदस्यता मोडको साथ
फ्लेक्सिबिट्सले सदस्यता नेटवर्कहरूमा पर्न धेरै लामो समय लिएको छ। म्याकको लागि उत्तम क्यालेन्डर अनुप्रयोगहरू मध्ये एक (वास्तवमा कुनै पनि एप्पल उपकरणको लागि), Fantastical, यो संस्करण to.० मा अद्यावधिक गरिएको छ र यसले एक नयाँ व्यवस्थापन मोडेल ल्याउँदछ। अब अनुप्रयोगहरू सबै प्लेटफर्महरूको लागि अद्वितीय छन् (यो राम्रो छ, हामी कुन उपकरणको आधारमा प्रत्येक संस्करणको लागि भुक्तान रोक्दछौं) तर यसले ल्याउने फेशनहरू मध्ये एक हो जुन मलाई कमसे मनपर्दछ: सदस्यता।
यो हुन सक्छ कि केहि को लागी, महीना को लागी एक महीना को लागी आवेदन को लागी मतलब छैन, तर म जस्तो अरुहरु को लागी, अनुप्रयोगहरु छन् जहाँ यो धेरै मतलब छैन। काल्पनिक ती मध्ये एक हो। क्यालेन्डर, जतिसुकै पात्रो भए पनि, मलाई लाग्दैन यो सदस्यताको लागि उत्तम उदाहरण हो। A VPN, हो। क्यालेन्डर, होईन।
यसको संस्करण in.। मा Fantastical ले यसको एक प्रयोगकर्तालाई का लागी र अर्को बालुवा ल्याउँछ
पहिलो पटकको लागि म्याकोससँग Fantastical अनुप्रयोगको विशेष संस्करण छैन। सबै अपरेटिंग प्रणालीहरूमा समान छ। कारण किनभने यो कम्पनीले सिर्जना गरेको हो यो भव्य अनुप्रयोग यसलाई सदस्यता मोडेल अन्तर्गत रूपान्तरण गरेको छ। जसले महीना महीना तिर्न नचाहनेहरूले म्याकमा उनीहरूको क्यालेन्डरको मजा लिन सक्नेछन, अब नि: शुल्क तर केवल आधारभूत मोडमा।
सदस्यता मूल्यहरु प्रति महिना .5.49 .33 are हो वा यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने, तपाईले पूरै बर्ष तिर्न XNUMX XNUMX% बचत गर्न सक्नुहुन्छ। दुबै योजनाहरूमा तपाईंसँग १ trial दिनको परीक्षण अवधि छ। प्रीमियम विकल्पहरू रोचक छन्, तर म फेरि भन्छु, कि कम्तिमा मेरो लागि, म एक महिना € लगभग तिर्न सक्दैन। मैले वर्षौंको लागि अनुप्रयोग स्थापना गरेको छु तर म सचेत छु कि म यसको पूर्ण लाभ लिने छैन, म भन्न सक्दछु कि एप्पलको क्यालेन्डर अनुप्रयोग मेरो लागि पर्याप्त छ।
समाचारहरू जुन प्रीमियम भइरहेको छ र त्यो आधारभूत वा नि: शुल्क संस्करण भन्दा फरक छ यो मुख्य रूप निजीकरण, उत्पादकता र सहयोगी कार्य सुविधाहरू मा निर्भर गर्दछ। तपाइँ एक संस्करण र अर्को बिच सहि भिन्नता देख्न सक्नुहुन्छ फ्लेक्सिबिट्सको आधिकारिक वेबसाइटमा। Fantastical २ उपयोगकर्ताहरूले स्वचालित रूपमा संस्करण 2. 3.0 मा अपडेट गर्दछ, तर नयाँ सुविधाहरू पहुँच गर्न तपाईंले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ
¿के तपाईं तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? Fantastical 3.0 अनुप्रयोग को लागी यो सदस्यता मोडल?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक प्रोग्रामहरू » म्याक अनुप्रयोग स्टोर » Fantastical 3.0: नि: शुल्क र सदस्यता मोडको साथ
एयरपड्स प्रो चाँडै स्टकको बाहिर चालु भईरहेछ कम छ
शान्ति! कोरोनाभाइरस एप्पल सुरुवात र उत्पादनहरु लाई असर गर्दैन